२०७५ चैत ४ गते ९:३० विकासन्युज
काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा अवैध ढुंगाखानी र बालुवाखानी सञ्चालन गरिँदा ललितपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने लेले, टीकाभैरव, दुम्सिडोल र देवीचौरस्थित सामुदायिक वन तहसनहस भएको छ । जनताको कामसँगै तल्लो तहमा विकास निर्माणको मुख्य योजनाकारका रुपमा...
काठमाडौं । नेकपाले जिल्ला तहमा रहने अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । नेतृत्वमा जिल्ला तहमा तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४३ प्रतिशत हुनेछन् । प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओली र अर्का...
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले गत फागुन २४ गते सिके राउत समूहसँग गरेको ११ बुँदे सहमति खारेज गर्न विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेकाे छ । विखण्डनकारी, देशद्रोही र हिंसात्मक कुनै पनि समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लेराउने सरकारको...
काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री भीम बहादुर रावलले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले उक्त...
काठमाडौं । मधेशमा पृथकतावादी अभियान चलाईरहेका डा. सिके राउत एकिकृत नेपालका पक्षमा फर्किएको कुरा के हो भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकालियो भने हतार हुन्छ । उनी एकिकृत नेपालका पक्षमा फर्किएको हो वा होइन भन्ने...
काठमाडौं । बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको ६७ औं जन्म दिन । फोन, एसएमएस र भेट मार्फत उनलाई जन्मदिनको शुभकामना निरन्तर आईरहेकै थियो । नेता नेपाल नियमित झै बिहिबार...
काठमाडौँ । संयुक्त अधिराज्य र अष्ट्रियाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको सराहना गरेका छन् । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी अष्ट्रियाका विदेशमन्त्री करिन कनिसल तथा बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क...
काठमाडाैं । पूर्व प्रशासनकहरुलाई संवैधानिक निकायमा किन नियुक्ति गरिदो रहेछ भन्ने कुराको चरितार्थ पछिल्लो पटक भएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति नामको रवर स्ट्याम प्रयोग गरेर विगतमा गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरुलाई सैवैधानिक निकायमा...
काठमाडौँ । इजरायलका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्ले नेपालका सात वटै प्रदेशमा इजरायलको ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी’ अर्थात इजरायली उच्च प्रविधिको तालिम केन्द्र खोल्नका लागि इजरायलका राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव राखेकी छिन् । इजरायलको...
२०७५ माघ २९ गते १४:०० विकासन्युज
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित प्राप्त ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यसअघि राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ लाई...
काठमाडौं । केही समय पहिले मात्रै सञ्चालनमा आएको काठमाडौँको ठमेलमा अवस्थित छायाँँ सेन्टर विवादमा फसेको छ । छायाँ सेन्टरलाई उसका साहु जीहरुले मिनी ठमेलको नाम दिएका छन् । सबै सेवा र सुविधाको केन्दै पनि...
नेकपाले भन्योः भेनेजुयलामाथी हस्तक्षेप हुनुहुन्न
२०७५ माघ २१ गते १६:४८ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले भेनेजुयलामाथी बाह्य हस्तक्षेप हुनु नहुने धारणा राखेको छ । सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले भेनेजुयलामा उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधान त्यहिँका जनताले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट खोज्नुपर्ने बताएको हो । ‘हाम्रो पार्टीले...
सभामुख महरा भन्छनः चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे आन्दोलनको अर्थ छैन्
२०७५ माघ २० गते १०:२८ विकासन्युज
दाङ । प्रतिनिधी सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा आन्दोलन गर्नु गलत भएको बताएका छन् । रिपोर्टस् क्लब दाङले तुलसीपुरको टरिगाउँ बिमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रक्रिया पु¥याएर पारित भएको विधेयकलाई...
दीपक मनाङ्गेले खाए प्रदेश सांसदको सपथ
२०७५ माघ १४ गते १८:०३ विकासन्युज
काठमाडौँ । राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेले भनेर प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएका छन् । सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सभामुख नेत्र अधिकारीले उनलाई सपथ गराएका हुन् । सपथ खुवाए लगत्तै सभामुखले टीका लगाइदिएका थिए ।...
गगन थापा भन्छन्ः काङ्ग्रेससँग आत्मविश्वासै छैन्
२०७५ माघ १३ गते ८:३८ विकासन्युज
चितवन । नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले काङ्ग्रेसमा आत्मविश्वास नभएको बताएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस माडी नगर समितिले माडीमा आयोजना गरेको नगरस्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा सम्मान कार्यक्रममा थापाले काँग्रेसमा आत्मविश्वास नभएकाले त्यसलाई बढाउन...
कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसदीय विधि र प्रक्रिया अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कास्की शाखाले पोखरामा आयोजना गरेको...
त्रिभुवन विमानस्थललाई आन्तरिक मात्रै बनाऔंः पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल
२०७५ माघ ९ गते १३:५४ विकासन्युज
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आन्तरित मात्रै बनाउने सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बुझाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विमानस्थललाई आन्तरिक मात्रै...
माधव नेपाललाई भेटेर के भने बेलायती राजदुतले ?
२०७५ पुष २४ गते १९:२२ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिसले पूर्बप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीको निवास कोटेश्वरमा भएको भेटमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीयताको कार्यान्वयन, स्थानीय तहको सवलीकरण, नेपालमा...
« अघिल्ला 1 …34567… 37 पछिल्ला »